Iyo Spotify app inosvika zviri pamutemo paApple Watch | Ndinobva mac
Sezvo iwe ungatoziva kare, kwenguva yakati zvakataurwa kuti Spotify yaizosvika zviri pamutemo sechikumbiro cheApple Watch, kuitira kuti igadzire imwe nzira kune avo vane mudziyo uyu asi vasiri Apple Music vashandisi.
Uye ndizvozvo, mazuva mashoma apfuura, beta yekutanga yeApple app yeApple Watch yakaonekwa, se isu tanga tataura kare kwauri, uye nguva pfupi yadarika takakwanisa kuona kuti sei kuvhurwa kweichi chishandiso kwakaitwa pamutemo kune vese vashandisi veichi chishandiso.
Spotify yave kuwanikwa zviri pamutemo yeApple Watch
Sezvatakadzidza, masikati ano kuSpain, taona zvishoma nezvishoma kubva kuSpotify vanga vachigonesa kunyorera kwavo kweApple Watch, kune vese vashandisi vekushambadzira mimhanzi sevhisi, saka unogona kutonakidzwa nazvo kana uchida.
Uye, zviripachena, kana iwe uine yazvino vhezheni yechishandiso yakaiswa pane yako iPhone, iyo mune ino kesi ingave 8.4.79, iwe unofanirwa kunge watove kukwanisa kutanga kuyedza Spotify pawachi yako, nekuti neiyi nyowani yekuvandudza, iko kunyorera kunoiswa paApple Watch, pasina kukosha kwematanho ekuwedzera. Saizvozvo, chokwadika, kana iwe usina, unogona kurodhaunta chero nguva, uye kana uchinge waita izvo, rinofanira kuwanikwa pawachi yako futi.
Spotify - Mumhanzi uye podcastvakasununguka
Ukuwo, mashandiro echishandiso ichi ari nyore, kunyange chiri chokwadi kuti haitenderi sarudzo dzakawanda. Iwe unogona kutamba nziyo dzawakawedzera, pamwe neako playlists kana chero chaunoda, kungave kubva kuApple Watch pachayo, kana nemahedhifoni, ayo mune ino kesi anonyanya kukurudzirwa. Uye zvakare, sezvazvinoitika kune mamwe mapuratifomu, iwe unozogona kusarudza mamwe madhizaini kuti uridze mimhanzi yako inosangana neakaunti yako yeSpotify, kana kutosarudza zvekutamba pawachi kubva ku iPhone yako, kana uchifarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo Spotify app inosvika zviri pamutemo paApple Watch
Apple inoenderera ichidonha mumusika wekutengesa uye varimi vanotya
Maitiro ekubvisa iyo "Simudzira kune macOS Mojave" meseji mu macOS High Sierra